Khilaafka siyaasadda: Haddii Farmaajo iyo Rooble ay heshiin waayaan maxaa la filan karaa? - Bulsho News
Khilaafka siyaasadda: Haddii Farmaajo iyo Rooble ay heshiin waayaan maxaa la filan karaa?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka jawaabay warqaddii madaxweynaha, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahayd in uu ka qaaday awoodaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu go’aankan qaatay ka dib markii uu Ra’iisal wasaaraha “ka weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku caddayd khudbaddii uu Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay Golaha Shacabka 1dii May 2021, Goluhuna uu tixgeliyay soojeedintaas”, waa sida ku xusan qoraalka Villa Somalia.
Ka dib kulan saacado badan qaatay oo 12-kii bishan dhacay, kaas oo ay soo abaabuleen xubno ka mid ah gudoonka Baarlamaanka ayaa la isugu keenay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Shirkaas wuxuu socda illaa saq-dhexe, balse wax natiijo ah lagama gaarin.
Waxaa sidoo kale jiray kulan kale oo ay garwadeen ka ahaayeen madaxda maamullada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, kaasna wax natiijo ah lagama gaarin. Waxaa halkii ka sii socday khilaafka in uu sii xoogeysto iyo tallaabooyiin ay qaadayaan labada xafiis – Midka madaxweynaha iyo kan ra’iisul wasaaraha.
Dad xog ogaal ah ayaa sheegay in arrinta taliyayaasha ay labada mas’uul ay u kala magacaabeen hay’adda sirdoonka iyo kiiska Ikraan Tahliil ay yihiin qodobadii ugu adkaa ee la isku fahmi waayay.
Xiriirkooda mar walba ma liitay?
Jawaabtu waa maya, sida ay sheegtay AFP. Rooble oo aan siyaasadda Soomaaliya markii hore laga aqoonin waxaa la bartay islamarkii uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay xilka Ra’iisul Wasaaraha, bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay.
Inta uusan siyaasadda soo galin waxa uu ahaa nin cilmiga injineernimada rayidka kusoo bartay dalka Sweden.
Bilihii hore oo dhan maamulka waxa uu si guud gacanta ugu jiray Farmaajo oo khibrad u leh siyaasadda, maadaama uu horay usoo noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ra’iisul Wasaare.
Kaddib markii uu madaxweynaha muddo kororsiga sameystay bishii April, iyadoo aysan doorasho dhicin, waxaa dhacay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa ee ay Soomaaliya soo marto muddo sannado ah.
Wuxuu u jeestay dhinaca Rooble oo ka codsaday inuu ka caawiyo dajinta xiisadda iyo qabanqaabinta doorashada.
Maxaa keenayo in wadaahadal lagu xallin waayo khilaafka?
Agaasime kuxigeenka Machadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda, Mursal Maxamed Saney ayaa BBC Somali u sheegay: “Horta aan wadahadalno waa aan heshiino, waana soo dhaweyneynaa inay wada hadlaan oo ay is horfariistaan madaxda iyadoo weliba ay dadaal ku bixinayaan mas’uuliyiin kale oo Soomaali ah, xalay in lagu kala tago arrintaas aad ayay shacabka Soomaaliyeed uga niyad jabeen.
“Waxaa la sugayay in lagu heshiiyo sababtoo waxaa muuqday in wax badan oo lagu heshiin waayo aysan meesha saarnayn laakiin waa soo baxday mar haddii lagu kala tagay inay jiraan wax badan oo lagu kala duwan yahay oo aad loogu kala aragti duwan yahay”, ayuu yiri.
“Waa wax laga xumaado in hal koox oo dowlad isku ah oo wada joogo hal guri oo 500 oo mitir ah ka yar ay hogaanka dalka isku fahmi waayaan, arrintaasi niyad jab weyn ayay keentay,” ayuu sheegay Mursal Saney.
“In lagu heshiin waayo waa nasiib darro Ikraan cadaalad ayay u baahantahay waalidkeeda cadaalad ayay ubaahanyihiin,hoggaanka amniga oo la magacaabay in la isku hkilaaf-na qudheedu waa wax meesha ku jira oo qof walba dhinac ayuu ka fiirinayaa.
“Haddii raysal wasaaraha la waydiiyo wuxuu leeyahay ‘amniga aniga ayaa mas’uul ka ah’, haddii madaxweynaha la wayadiiyana wuxuu leeyahay ‘anaa aha taliyaha ciidamada qalabka sida’. Marka qof walba waxbu adeegsanayaa maadama dastuurkiina ku meel gaar yahay” ayuu yiri Mursan Saney.
Waan-waanta socota hadda waxaa wada oo hormuud ka ah madaxda mamaul goballeedyada Koofur galbeed iyo Galmudug kuwaas oo ku dadaalaya in xal laga gaaro khilaafkaan iyo xiisadda ka dhalatay.
Balse waxay u muuqataa in aaney wali ka gaarin natiijo la taaban karo, waxaase la is waydiinayaa haddii sida qorshuhu yahay wax u dhici waayaan oo dadaallada lagu wadahadaheshiinayo mas’uuliyiinta dalka ugu sareeysa la isku fahmi waayo ma imaan kartaa faragalin dhanka caalamka ah oo la isugu keenayo Farmaajo iyo Rooble?
“Waxaan aad u aaminsaanahy oo aan markasta ku cel-celinaa in Soomaalida iyaga xallistaan arrimahooda sababtoo ah ceeb ayay nagu tahay in 30 sannadood iyo ka badan nalagu dhex-jiro balse haddii la heshiin waayo khasab ayay nagu noqonaysaa.”
Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Mioobay, Aamina Maxamed, oo maalmo ka hor booqatay Muqdisho waxayna la kulantay raysal wasaaraha iyo madaxda Maamul Goboleedyada marka, arrimaha laga wadahadalay waxaa ka mid ahaa doorasho iyo arrimaha cadaaladda.
Mursal Saney wuxuu yiri: “Arrimahan faraha ayay la soo geli doonaan iyadoo intaan laga fool-xun-yahay oo Soomaalida ay ka ihaaneysantahay shacab iyo madaxba ahaan, waxaana la isku khasbi doonaa wixii markaas loo arko inay xal tahay.”
Maxay muhiim u tahay in khilaafka la xaliyo?
Iyadoo al-shababaab ay gacanta ku hayaan dhul ballaaran oo ka mid ah waddanka, Soomaaliya tabar uma heyso inay lugaha la gasho xiisado siyaasadeed oo faraha ka baxa.
Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya waxay aasaas u tahay dagaalka ka dhanka ah ururrada gacan saarka la leh al-Qaacida, kuwaasoo si deg deg ah uga faa’iideysan kara daciifnimo kasta oo imaata.
Kooxda al-shabaab durbaba waxay soo dhex gashay murankan waxayna si aan horay looga baranin u beenisay war kasoo baxay NISA oo lagu sheegayay in Ikraan ay dileen kooxdaas.
Beesha Caalamka ayaa walaac muujisay, waxaana Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Amisom, Mareykanka, Midowga Yurub iyo IGAD ay dhammaantood ku baaqeen in hoggaamiyeyaasha is haya ay mudnaanta siiyaan danta dalka.
Toban sano kaddib kooxda xiriirka la leh al-Qaacida laga saaray magaalada Muqdisho, dowladdu waxay maamushaa dhul kooban, iyadoo waliba caawinaad ka heysata ilaa 20,000 oo askari oo ka socda AMISOM.
“Bishii April waxaan aragnay sida ay Muqdisho deg deg saldhig ugu noqotay ciidamo taageersanaa xubnaha mucaaradka kaddib markii uu xoogeystay khilaafkii siyaasadeed,” ayuu yiri Cumar Maxamuud oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Hay’adda Xasaradaha Caalamiga ah (ICG).
“Inkastoo ay ku xiran sida ay xaaladdu noqoto maalmaha soo socda, haddana waxaa laga yaabaa in marxaladdii mid la mid ah la galo.”